Health Services Board (HSB) Archives » 263Chat, Convening dialogue in Zimbabwe
The Health Services Board (HSB) has condemned the current salary negotiating framework saying it makes it difficult for them to meet the wage demands of doctors, nurses and other medical staff. The HSB said they would prefer negotiations…
Parirenyatwa Health Workers Protest Against Slashed Allowances
Health workers at Parirenyatwa Hospital staged a demonstration at the Health Service Board (HSB) offices demanding better working conditions and an explanation on why some allowances were deducted from their salaries. The placard wielding…
Fadzai Ndangana Nov 8, 2019
The citizens have cried foul over government's decision to fire medical doctors, a move that has brought the already stuttering country's health delivery system to total collapse. Medical doctors at all major referral hospitals have not…
Fadzai Ndangana Oct 7, 2019
Doctors from government owned hospitals have have pulled out of the Health Apex council citing its failure to represent and negotiate for better working conditions. The Zimbabwe Hospital Doctors Association (ZHDA) submitted a letter to…
Fadzai Ndangana Sep 4, 2019
The Health Service Board (HSB) has announced an agreement with treasury for a cost of living allowance adjustment to mark the end of a countrywide strike by doctors that kick started yesterday. According to the Zimbabwe Hospital…
Fadzai Ndangana Aug 8, 2019
The Ministry of Health and Child Care has come under fire for failing to deploy recently qualified 15 doctors despite the huge shortage of doctors in the health system. In an interview with 263Chat, Health Apex national spokesperson,who is…
Fadzai Ndangana Jun 17, 2019
Health Services Board Apex Council and the Zimbabwe Nurses Association (ZNA) have from today embarked on a strike following the failure by government to respond to the 14 day ultimatum announced two weeks ago. In a letter addressed to…
Zim Nurses Withdraw Court Challenge Against Govt
Staff Reporter Apr 26, 2018
Zimbabwe Nurses Association has withdrawn its application challenging the termination of employment contracts for some striking nurses employed at state-run hospitals. In a notice of withdrawal filed with the Registrar of the High Court on…